कोरोनासंग हामी अझै बढी सचेत हुनुपर्ने हो कि! – NawalpurTimes.com
प्रकाशित : २०७७ भदौ ८ गते ८:००
डिसेम्बर २०१९ मा शुरु भएको कोरोनाले हाल सम्म पनि विश्व मानव समुदाय लाइ तर्साई रहेको छ। आतंकित पारिरहेको छ। यसको कुप्रभाव को परिणाम को हिसाब किताव अर्थशास्त्री र तथ्यांक शास्त्रीले गर्दै होलान।
यहि गतिमा विश्वभर कोरोना संक्रमण बढ्दै गएमा भारत दोस्रो नम्बरको कोरोना प्रभावित देशको रूपमा आइपुग्न कत्ति बेर लाग्ने छैन् र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ। नेपालको छिमेकी मुलुक भारतमा तिब्र गतिमा बढेको कोरोनाको संक्रमित संख्याले हाम्रो मन पोली रहेको छ।जुन स्वाभाविक छ। तर मन पोलाएर भन्दा हामीले होसपूर्ण तवरले पुरा सचेतनाका साथ व्यवहार गर्नु जरुरी छ। आफु घर बाहिर जाँदा होस् वा घर भित्र बस्दा हर प्रहर सचेतना अपनाउनु जरूरी छ।
फेरी कोरोनको लक्षण सामान्यतया ज्वरो आउने, घांटी दुख्ने, टाउको दुख्ने, स्वास प्रस्वास छिटो छिटो हुने, स्वास फेर्न कठिनाइ हुने, खोकी लाग्ने, अल्छी लाग्ने, कम्जोर महशुस हुने, जिउ र मांसपेसी दुख्ने, जिउ गल्ने, जिव्रोको स्वाद हराउने, शुघ्ने शक्ति हराउने, सिंगान बगी रहने, वा नाक बन्द हुने, दिसा लाग्ने, बान्ता हुने आदि मध्ये कुनै हुन्छ वा केहि लक्षण देखिन्छ।कसैलाई रोगका किटाणु सरेको भए पनि केहि पनि लक्षण नदेखिने पनि हुन्छ।
माथि उल्लेखित बाहेक अन्य थप धेरै कुरा हुन सक्छ भन्छन यसका अनुभवी र भुक्तभोगी अनि विशेषज्ञहरु। त्यसकारण यी सबै कुरा प्रति सचेत रहनु पर्छ। यो त विशेषज्ञले जाच्ने कुरा भयो। तर हामीले सामाजिक पक्षलाइ विचार गरेनौ भने आफुलाई रोग सल्कने डर बढी हुन्छ र आफु बाट अरुलाई सर्ने डर पनि त्यतिकै हुन्छ। त्यसैले हामी सदा सजग भएर सामाजिक दुरी कायम गर्ने परिवार बाहेक कहीं पनि अन्यत्र ६ फिटको दुरी कायम गर्ने, हुलमूल भएको वा हुने ठाउँमा नजाने, जान परे मास्क लगाएर जाने, गएर फिर्ता आए पछी साबुन पानीले हात धुने, वा स्यानीटाइजर को प्रयोग गर्नु जरूरी छ।जसले गर्दा आफु वच्न र अरुलाई पनि वचाउन मद्दत पुग्छ।किनकि तपाइले कोरोना बोकिरहेको छु भन्ने थाहा तपाईलाई नहुन सक्छ कारण के भने यसको लक्षण नदेखिएपनि हामी संग हिडीरहेको वा वसी रहेको हुन सक्ने रहेछ।
आफ्नो आफन्तहरु कसैलाई स्वास प्रश्वासमा धेरै गाह्रो भयो भने, छाती लगातार दुखि रह्यो भने, छाती गरुङ्गो भैरह्यो भने, निद्रा लागिरहने भयो भने अनि ओठ र अनुहार निलो भयो भने जस्ता यावत लक्षण देखिएमा तुरुन्तै नजिकको अस्पालमा जानु पर्छ। जहाँ कोरोना उपचारको सेवा पाउन सकियोस।
ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरुमा सामाजिक नियम अलि अलि खुकुलो हुन साथ फेरी फेरी दोहोरिएर कोरोना ले झन् बढी ग्रस्त तुल्याएको छ। अमेरिकामा त पहिले भन्दा निक्कै चर्को रुपमा दैनिक ६० हजारको हाराहारीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको छ। एकै दिन ७७ हजार सम्म एकै दिनमा पनि थपिएको रेकर्ड छ अमेरिकामा। डर के हो भने एक जनाले एक जनालाई मात्र संक्रमण बढाए पनि हरेक पल दोब्बरको संख्यामा संक्रमण बढ्ने छ। त्यसैले हामी पनि यो मानव जातिकै चुनौतिको रूपमा आएको महामारीलाई होसियार भएर सुझबुझका साथ् अघि बढेनौ भने पछुताउने मान्छे पनि भेटिन मुस्किल पर्ला भन्ने डर हो।
यहाँ मैले अस्पताल र उपचारको कुरा गर्न खोजेको भन्दा पनि हामी कसरी कोरोना बाट वाच्न सक्छौ र अरुलाई वचाउन मद्दत गर्न सक्छौ भन्ने नै हो। यहाँ अमेरिकामा रहंदा मैले यो समाज र परिस्थिति बाट जे सिकेको छु सो कुरा शेयर गर्न खोजेको मात्र हुँ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा कोरोनाले नेपाललाई पनि नराम्रो संग गाँज्ने लक्षण देखिदै छ। छिमेकी मुलुक भारतमा अहिले केहि दिन यता दैनिक ६० हजार भन्दा बढी मानिस लाइ संक्रमण भै रहेको छ। अमेरिकामा यत्रो समय बिती सक्दा पनि ५०-६० हजार दैनिक संक्रमितको संख्या थपिएकै छ। ब्राजिल त्यस्तै तहस नहस भएको छ। धेरै वटा मुलुकमा कोरोना बारम्बार झम्टेर आइरहेको देखिन्छ ।
तसर्थ, हामी डराएर हैन, होसियारका साथ साबधानी अपनाएर नै यो रोग लाइ परास्त गर्न सक्छौं।
नेपालमा पनि सरकार वा सम्बधित निकायले विशेषज्ञहरु संग परामर्श लिएर नै के गर्दा वच्न र वचाउन सकिन्छ भनेर धेरै नियम उपनियम र अनुशासन निर्धारण गरेको छ। त्यसैले सरकारले जारी गरेको नियम लाइ पूर्ण पालना गरौं। त्यसो भनेर दैनिंक हात मुख जोड्ने कामै रोक्ने पनि भनेको हैन बरु सबै नीति नियम पालना गर्दै काम पनि अघि बढाउँ भनेको भने पक्कै हो।
हाल सम्म पनि यो रोगको विरुद्ध खोप बनि सकेको छैन न त प्रभावकारी उपचार नै उपलब्ध छ हाम्रो देशमा। भर्खर मात्रै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले खोप बनेको र पहिलो खोप उनकै छोरी लाइ दिलाएर उद्घाटन गरेका छन्। तर हाम्रो देश सम्म त्यो कहिले आइपुग्ला? उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना टाढा देखिन्छ। त्यसैले हामीले कोरोना रोग लाइ परास्त गर्न सामाजिक दुरी कायम गर्ने, कहीं कतै पनि धेरै मानिस भएको ठाउँमा नजाने, जानै पर्ने परिस्थितिमा मास्क लगाएर जाने, गएर आए पछी लुगा धोई पखाली गर्ने आफु नुहाएर मात्र आफ्नो परिवार संग वस्ने गरौं।
अहिले अमेरिका होस् वा नेपाल जुन सुकै देश पनि उत्तिकै जोखिममा छ। नेपाल त अझ भारत मा फैलिएको संक्रमण एकदम छिटो पुग्न सक्ने देश भएको ले अहिले घुम फिर, तिर्थ गर्ने पर्यटन गर्न जाने वेला हैन यहाँ त संयमताको साथ् जोगिने र जोगाउने नै हो। भोज भतेर जाने बिबाह ब्रतबन्ध जाने कुराले पनि ज्यादै जोखिम बढाउछ। त्यसैले यी उल्लेखित कुरा लाइ टाढै राख्ने आफु तन्दुरुस्त हुन सजिलै र सस्तोमा नै उपलब्ध हुन सक्ने खाने कुरा समयमा नै पोषिलो खाना खाने, तातो र ताजा खाने कुरा र झोलिलो रसिलो खानेकुरामा जोड दिने। मनमा पिर पिडा लिने नभई सहज मन मस्तिष्क जिउने प्रयास गर्ने। नआत्तिने धैर्य पुर्वक वस्ने। सार्वजनिक यातायात कम भन्दा कम प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ।
खेत, बारी, बगैँचा मा काम गर्ने बाल बालिका संग खेल्ने भुल्ने, परिवार भित्र नै रम्ने रमाउने। योग प्राणायाम, ध्यान गर्ने, नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने। पारिवारिक माहोलमा खेल्न मिल्ने खेल क्यारमबोर्ड, बाघचाल, लुडो, चेस, चाइनिज चेकर, ब्याडमिन्टन आदि खेल्ने। मलाई के लाग्छ भने गाउँ घरमा यदि खेति पाति तथा वस्तुभाउ संग रम्न सकेको खण्डमा हाम्रो समय राम्रो संग नै बित्न सक्छ।
सुझाबको लागि: [email protected]